"Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa, kunobva pakutenda kuchienda kukutenda; sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Wakarurama uchararama nokutenda" (VaRoma 1:17).
Vanhu vanotsvaka kuva vakarurama. Vanotsvaka kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvatinovona muzvinamati zvepasi rose. Vanotamburira kuva vakarurama. Vanoita mabasa akawanda kuti vave vakarurama. Kunyangwe vamwe Vakristu vanototamburiravo kudai. Vanotsvaka kuwedzera kururama kwavo. Vanofunga kuti izvi ndizvo zvinodiwa kuti Mwari vanzwe minamato yavo.
Mwari vane kururama kwavanopa. Kururama uku kunowanikwa muVhangeri. Hapana pamwe pakunowanikwa. Zvino, Mwari vakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvinotaura Shoko raMwari. Takanga tisingagoni kukuwana neimwe nzira. Vhangeri inhau dzakanaka. Vhangeri iri rinozivisa kuti Mwari vakatipa kururama kwavo. Vakatipa sechipo. Iwe wakanga usingagoni kuwana kururama uku nesimba rako. Saka unofanira kugamuchira kururama uku. Kunobva kwaiswa mumweya wako. Izvi zvinozoita kuti ugone kurarama zvakarurama.
Mwari vakakupa kururama. Kururama uku ndiko kwavanako ivo. Ndiko kwavanoshandisa. Izvi zvinoita kuti uve wakasununguka. Zvino, Mwari havatoreri munhu chavanenge vamupa. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaRoma 11:29. Zvekare, kururama uku kwakatokwana. Haufaniri kukuwedzera. Wakakupiwa naMwari pachavo. Ndiko kururama kwavanakovo ivo. Saka haugoni kuwedzera kururama. Wava kugona kumira pamberi paMwari. Unomirapo usinganyari. Izvi zvinoshamisa!
Iri ndiro Vhangeri raJesu Kristu. VaRoma 3:24 inotaura ichiti, "Vanongoruramiswa nenyasha dzake nokudzikinura kuri munaKristu Jesu". Isu takashambadzwa sevanhu vakarurama. Takaruramiswa nenyasha dzaMwari. Takachenurwa. Takawanikwa tisina mhosva yatakapara. 2 VaKorinte 5:21 inotaura ichiti, "Uyo, wakanga asingazivi zvivi, wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu; kuti isu tive kururama kwaMwari maari".
Isu takanga tiri vatadzi. Jesu vakanga vakarurama. Asi vakasarudza kuva mutadzi ivo. Vakaita izvi kuti isu tive vakarurama. Tava muna Kristu Jesu. Saka tava kururama kwaMwari. Takarurama saJesu. Mwari ndivo vakatiita izvi. Ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inotaura ichiti, "Kuti kururama kwake kuratidzwe, nenguva ino, kuti arurame iye amene, vuye aruramise uyo unotenda kunaJesu". Mwari ngavaropafadzwe!
Ndinokutendai, Baba vandinoda. Makaisa kururama mumweya wangu! Ndava kuziva kuti handichina mhosva pamberi penyu. Nokudaro ndinofara. Ndinopembera. Munoita kuti ndikurire zvinhu zvenyika ino. Munoita kuti nditonge naKristu nokusingaperi. Muzita raJesu. Ameni.